Chin World News – Page 18
Sermons December 18, 2018
Rev. Hoi Cung Tum – Jesuh Zulh Hi Rumnak Lungvuah A Si Lo + Video
Jesuh na zulh hi RUM nak caah maw zul lai cih, RUM nak silo, naipalh cikcek lai an deuh hrimhrim lai, Piangthar Cancerangeimi an tampi, Jseuh zulh hi damnak zongasi lo….
World News December 18, 2018
အစ္စရေးနှင့် ကမ္ဘာကျေ်ာ မော့ဆက်အဖွဲ့သိကောင်းစရာ
ရေးသားသူ – မောင်သာ (ရှေးဟောင်းသုတေသန) နိုင်ငံရေးအဆင်မပြေမှုများကြောင့် ရန်သူအာရပ်များဝိုင်းရံနေသည့် အစ္စရေးနိုင်ငံသည်များစွာသော ရန်သူအင်အားများကို ဂရုမမူဘဲအရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ၊ မြေထဲပင်လယ်အရှေ့တောင်ဘက်ကမ်းခြေနှင့်ပင်လယ်နီ မြောက်ပိုင်းကမ်းခြေ အကြားတွင် ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရပ်တည်နေသည်။ အစ္စရေးနိုင်ငံ၏ မြောက်ဘက်တွင် လက်ဘနွန်၊ အရှေ့မြောက်ဘက်တွင် ဆီးရီးယား၊ အရှေ့ဘက်တွင် ဂျေ်ာဒန်၊ အနောက်ဘက်ကမ်းနှင့် ဂါဇာကုန်းမြေတို့တွင်ပါလက်စတိုင်းတို့နှင့် နယ်ချင်းဆက်နေသကဲ့သို့အနောက်တောင်ဘက်တွင် အီဂျစ်နိုင်ငံနှင့် ထိစပ်နေသည် ။ သေးငယ်သော အစ္စရေးနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးနှင့် နည်းပညာဗဟိုဌာနများသည် မြို့တော်တဲလ်အဗစ်တွင်စုစည်းနေသည် ။ အစ္စရေးအစိုးရသည် ဂျေရုဆလမ်ကို…
Chin News December 18, 2018
Mah lawngte cit khawhnak vanzuang motor tuah khotu Philippine Ngakchia pate “Mendiola” kawng
Mah ngakchia pate hi Philippine AllStars dance/lam cawnnak company dirhtu Fapa Kyxz Mendiola tiah amin theih asi. Phippine ramah motor tuah hi acoyah nih limited ngeih in tuah asi tik ah amah lawngte i citkhawhnak…
World News December 17, 2018
ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ်များ၏ လူသိနည်းသော အချက်အလက်များ
ကမ္ဘာပေါ်မှာနိုင်ငံတကာ ခရီးသွားတွေ အလေးအနက် သွားရောက် လည်ပတ်ကြရတဲ့အထင်ကရအံ့ဖွယ် အဆောက် အအုံကြီးတွေ ရှိနေပါတယ်။ အီဂျစ်ကပိရမစ်ကြီးတွေလို ရှေးဟောင်းဂူသင်္ချိုင်းကြီးတွေက အစပြုလို့ အီဖယ်လ်မျှေ်ာစင်လို ခေတ်သစ်ဗိသုကာ လက်ရာတွေထိ ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ် အဆောက်အအုံကြီးတွေဟာ လူ့သမိုင်းကြောင်းကို အစဉ်အဆက်ပြောပြနေတဲ့သက်သေပြယုဂ်တွေလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ် အဆောက်အအုံကြီးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လို တည်ဆောက်ခဲ့ကြသလဲ ဆိုတာကိုတော့ လူတိုင်းအလွယ်တကူ သိနိုင်ကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အံ့ဖွယ် အဆောက်အအုံကြီးတွေရဲ့…
အမှိုက်မရှိတဲ့ဂျပန်က မြို့ကလေး(Athiang ngaimi khuapi pakhat)
ရေးသားသူ – ချစ်ဖေ (တောင်တွင်းမြေ) ကမ္ဘာမှာ လူဦးရေတိုးပွားလာမှုရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ရလဒ်တခုဖြစ်တဲ့လူတို့ရဲ့ စွန့်ပစ်အမှိုက်ပမာဏ မြင့်မားလာမှုဟာ ဒီနေ့ခေတ် ကမ္ဘာကို အကြီးမားဆုံး စိန်ခေါ်နေမှုတွေထဲကတခုပါ။ အထူးသဖြင့်တော့ ပလက်စတစ် အမှိုက်တွေပါ။ ဆွေးမြေ့ဖို့ နှစ်ပေါင်းများစွာ အချိန်ပေးရသလို မြေဆီလွှာကိုရော အပင်တွေ ပေါက်ရောက်ဖို့ပါ ခက်ခဲစေတဲ့အမှိုက်တွေပါ။ သုံးပြီဆို ရင်တော့သေချာပေါက် အမှိုက်ဖြစ်လာမှာမို့ အသုံးလျေ့ာမလား။ Recycle ဆိုတဲ့ …
Chin News December 17, 2018
Mizoram 2018 Election thimnak Seat 40 MLA umnak ah MNF Party Seat 26 ah thim/tlingasi. Minister hna.
India ram cu Democracy asi bantukin kum5hnu ah MLA thimnak antuah tawn bantukin tukum 2018 November 28 thimnak ah hin kum 10 chung Acoyah Ruling asi mi INC Congress cu seat5lawngah…
Chin Miphun Hi Ralzam-Refugee In Ramdang Kan Kal Hi Sual A Si Maw?
Chin Miphun Hi Ralzam-Refugee In Ramdang Kan Kal Hi Sual A Si Maw? Vawlei cung mifim hna nih Chin miphun hi ralzam dirhmun pek awk tlak an si ko tiah an ceih hnu ah ram…
Knowledge December 16, 2018
Pastor Riantuan Hi Vawlei Cung Rianah A Har Bik
Pastor rianatuan bal lomi hna nih cun, Pastor rian hi vawlei rian ahafawi cem tiaharuatmi an um. Pathian rian cu pumpek in tuanmiasi caahahar khun…
Chin News December 16, 2018
US PRESIDENT ASI CANGMI HNA KONG A THEIHNGALH RIH LOMI CAAH AMAK NGAINGAI MI AN UM TU NING HNA (Pehthan nak)
33.Harry S Truman – A min lai ah “S”achiah mi hi zeihmanh sullam angei lo A pu le pahnih min ah “S”aum ruangah chiah ve mi asi. 34.Dwigh David Eisenhower –…
Chin miphun nunphung festivals khuacongkhuacang tho(Pu Lian Uk)
Atuchan ah Chinmiphun Krifabu kaakip Krifab hmetete zong nih Misionary ttuanlo cun kan Krifabu anung kho lai lo ti tluk ruahnakphun in Krifa umlonak ah Missionary an thlah I acheu nih Krifa asicia mi sin…